निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? छ भने ह्याच बेबीले ल्याएको छ निन्द्रा लगाउने स्पिकर - Morning Bell
निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? छ भने ह्याच बेबीले ल्याएको छ निन्द्रा लगाउने स्पिकर
Reporter	काठमाडौं	फागुन ९, २०७७
के तपाइलाइ निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ ? निन्द्रा पुरा नभएर हैरान हुनू भएको छ ?त्यसो हो भने अव चिन्ता नलिनुस तपाइलाइ निदाउन सहयोग गर्नेछ ह्याच बेबीले। ह्याच बेबी नामको उत्पादनले तपाईंलाई राम्रो निन्द्रा दिलाउन सक्छ । कम्पनीले बालकदेखि वयष्क र वृद्ध जो कसैले यो डिभाइसको सहयोगमा राम्रो निन्द्रा सुत्न सक्ने दाबी गरेको छ ।
यो एउटा अलेक्सा पावर्ड स्पिकर हो जसलाई कम्पनीले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको थियो । ह्याचका सीईओ एन क्रेडी विसले यो प्रडक्ट बच्चालाई राम्रो निन्द्रा दिलाउनका लागि सहयोगी हुने बताएका छन् ।
अमेजनमा यो प्रडक्टमाथि ४।५ स्टार रेटिङ ५००० भन्दा बढी ग्राहकले रिभ्यु दिएका छन् । यसको डिजाइन अमेजन एलेक्सा स्पिकर जस्तै छ ।
ब्लुटुथको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनलाई पनि यससँग जोड्न सक्नुहुन्छ । यसलाई बनाउन एबीएस प्लास्टिक सामग्री प्रयोग गरिएको छ । यसमा एलईडी लाइटका साथै फेब्रिक पनि पाउन सकिन्छ । यसको माथिल्लो भागमा थिच्दा लाइट अन हुन्छ, जुन स्पिकरको चारैतिर बल्ने गर्दछ । स्पिकरको तल्लो भागमा यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि बटनहरु राखिएका छन् ।
जसमा साउन्ड र लाइट बटन समेत रहेका छन् । यसलाई ह्याच स्लिप एपको सहयोगमा कन्ट्रोल गरिन्छ । जुन आईओएस तथा एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छ । एपको सहयोगमा स्पिकरमा फरक फरक रङ्ग देखिने नाइट ल्याम्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
साथै तपाईंले यसमा रेन्डम कलर समेत तयार पार्न सक्नुहुन्छ । यस बाहेक अटो मोड छनौट गर्ने विकल्प पनि यसमा छ । यो एपमा ११ प्रकारका साउण्ड दिइएका छन् ।
जसमा वर्षात्, रेडियोको आवाज, किराहरुको आवाज, चराहरुको चुरुबुर जस्ता कयौं साउन्डहरु छन् । कयौं व्यक्तिहरुलाई यस्तो आवाज सुन्दा चाँडै निन्द्रा लाग्ने गर्दछ । यी साउन्ड निश्चित समयपश्चात आफैं बन्द हुन्छन् । यसमा अलार्मको अप्सन समेत दिइएको छ ।
यसको अर्थ राम्रो निन्द्रा परेपछि यही स्पिकरले तपाईंलाई ब्युँझाउने काम पनि गर्दछ । यसको मूल्य करिब १६००० रुपैयाँ रहेको छ । डिभाइस हाल तीन वटा फरक फरक डिजाइनमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
९ फागुन २०७७, आइतवार १९:२५ बजे प्रकाशित
बलात्कारमा संलग्न भएको आरोपमा एक महिला पक्राउ